Boomerangs: Otu esi ewu ma malite ha - Ikkaro
Kedu ihe bụ boomerang?
Boomerang bụ ihe, mgbe a tụbara ya, na-alaghachi na mbido ya n'ihi profaịlụ pụrụ iche ya na mmalite ya. Ihe ọ bụla dị irè iji wuo boomerang: osisi, plastik, kaadiboodu, eriri carbon, aluminom, wdg.
Kedu otu boomerang si arụ ọrụ
Ha nwere ike iwere ụdị ọ bụla ma bụrụ nke a ga-ebupụta nke mere na ha na-atụgharị na okporo ahịhịa ha. "na-awakpo" ikuku ka boomerang na-agbanye onwe ya ma na-eme njem. Pathzọ nke mwepụ a na-anọghị na ọsọ na-agba ọsọ na ọsọ ọ na-agagharị na mpaghara ya ma bụrụkwa ihe na-aga n'ihu na boomerang ọ bụla. Nke a na - eme n'ihi na ka boomerang na - agbagharị na ntọala ya ma na - aga n'ihu, agụba na oge ahụ na - agbagharị n'okporo ụzọ nke boomerang na - akwado karịa nke na - agbanwe n'oge ahụ na - abụghị ụzọ na - aga n'ihu, nke a torque na-emepụta ma ọ bụ gyroscopic precession n'echiche ahụ.
Boomerangs nwere ike nwee ọnụọgụ ọ bụla. Udo ekwesịghị ịdị otu ma ọ bụ boomerang symmetrical; Enwere boomerang dị ka V, W, nwere akara atọ, blades kesara dị ka ahịhịa nke helikopta, nke yiri kangaroo, mbe, azụ, wdg. Ka ọ dị ugbu a, eji boomerang eme egwuregwu zuru ebe niile, enwere asọmpi mba ofesi ebe, site na modality, ụzọ ịchụ ya, izi ezi nke nloghachi, oge ụgbọ elu, ọnụọgụ nke "nwudo" n'otu oge enyere ma ọ bụ ogologo nke na-apụ apụ tupu ịlaghachi, iji nye ọtụtụ ihe atụ.
Akụkọ banyere Boomerangs
Ọ bụghị arịa niile a na-akpọkarị boomerang laghachitere onye na - ebupute ya: ndị ndị Aborigine Australia jiri maka ịchụ nta alọghachighị na aha ha abụghị boomerang, kama ọ bụ kylie.
Ejibeghị boomerang na-alọghachị azụ maka ịchụ nta ma ọ bụ ibu agha. Kylie kwụsịrị iji ya mgbe a na-etinye usoro ịchụ nta ndị ọzọ dịka ụta na akụ.
Boomerangs abụghị naanị Australia; nke kacha ochie nke enwetara ruo ụbọchị a hụrụ na Poland na 1987 na afọ ya gafere afọ 20.000. Achọpụtala ha na kọntinenti ise, e nwere ọbụna ha n’ili Tutankhamun, ihe karịrị puku afọ atọ gara aga.
Isi ojiji eji boomerangs n'Ijipt oge ochie bụ egbe egbe.
Otu esi eji bootu osisi mee boomerang
Ee; Amaara m na vidiyo ahụ dị n'asụsụ Bekee, mana ịhụ ya ị ga-aghọta n'ụzọ zuru oke usoro nke iwulite boomerang a, ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme akwukwo boomerang
Vidio atọ iji kụzie otu esi eme obere akwụkwọ boomerang.
Dị mfe, mana ọ na - arụ ọrụ, agbanyeghị na m ga - adọ aka na ntị na ọ siri ike ịchọta ụzọ iji tufuo ya. Atụla anya nsonaazụ dị ka nke boomerangs osisi ma ọ bụ mkpọsa ndị ọzọ, mana dị ka egwuregwu aghara aghara na nzukọ ma ọ bụ maka ụmụaka igwu ya dị ezigbo mma.
Enwetara m ọtụtụ ihe dịka 30 - 40 cm. Yabụ ịnwere ike ịnwale ya iji hụ ma ị ga - emeri ya ;-)
Ana m ahapụ gị ọtụtụ vidiyo ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nke ọ bụla n'ime ha ọ ga-ezuru, n'ihi na ọrụ ahụ dị mfe iji mezuo, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ukwuu iji nweta nke ahụ akwụkwọ boomerang laghachikwute gị.
Boomerang Blueprints nke Pierre Kutek dere
Njikọ a na-emetụta dị egwu na ụwa boomerang na echere m na o kwesịrị post iji gosipụta ya.
Ndị na-amalite dị ka m, ma ọ bụ na-achọ ịmata ihe kwesịrị ile anya. Ọganihu ndị ọkachamara na-ama banyere ya maara ya n'ezie, ma ọ bụ ebe a na-edekarị aha.
Ọ bụ web nke Pierre Kutek ebe anyị nwere ike ịchọta nchekwa data nke atụmatụ boomerang nwere ọtụtụ narị atụmatụ dị
O doro anya Nchịkọta kachasị mma nke gbaa nke boomerangs na ị nwere ike ịchọta na ịntanetị.
Boomerang nwere CD ma ọ bụ DVD
Ha na-ekwu na amaghị ihe dị egwu nke ukwuu…. na akaebe nke a bụ m nwara m wuo boomerang na cd, nke mechara bụrụ ọghọm zuru ezu.
Ma ekele m namesake onye meghere a blog, Boomeralia ukwuu tụrụ aro, anyị pụrụ ịhụ atụmatụ na a prototype nke a boomerang na CD
Ana m ewere ikike ịkpọ CD / DVD
Ọ bụ Ọganihu Stanislaus, Amabeghị m onye ọ bụ na onye m ga-achọ ka m rụtụ aka na ya
Wuo boomerang site na CD (Ọdịda)
N'oge gara aga, agụrụ m na ị nwere ike conconsting a boomerang site na iji CD, nakwa na ọ ga-ekwe omume iji ụgbọ elu nke 1 m fefee ma m ga-anwale ya.
Tupu ihe ọ bụla na mgbe m gara aga ọdịda na-ewu a boomerang Ekwesịrị m ịdọ gị aka na ntị na nke a abanyeghị.
Iwuli a boomerang 1
Achọrọ m ogologo oge mee boomerang nkem. E nwere weebụsaịtị nwere atụmatụ zuru ezu na nkọwa banyere ihe ndị a ga-eji na ụzọ iwu.
Mana dika mgbe obula, ekwesiri m igosipụta ihe m tinyere n'isi m, na inwe ahuhu obu ezie na otutu ndi mmadu duru ya odu.
Agaghị m ebipụta post a, mana olee otu njehie na-adaberekwa, lee gbalịa wuo ọcha boomerang.
Echiche dị mfe. Enwere m boomerang, M na-eme a ebu site na ya na mgbe ahụ m nnọọ jupụta ya na-acha ọcha gluu.
Esi otutu boomerang
Ọ bụ ezie na na blọọgụ a ọdịnaya dị na mbụ ma ọ bụ na mgbakwunye anyị, anyị na-ewepu izipu isiokwu a ka esi atụba boomerang nke m chere dị mkpa maka ndị niile chọrọ ịmalite na ntụrụndụ / egwuregwu a.
Lee ọ na-aga….
Edemede na foto esitere na boomeralia. site na ebe ha na-ekwe ka mmeputa nke isiokwu ahụ.
Jidere ka ịchọrọ ọ bụrụhaala na akụkụ dị larịị dị n'èzí. N'agbanyeghị skulu ahụ, ma ọ bụ mkpịsị aka abụọ ma ọ bụ jiri aka niile. Ga-enwe ike
Mee ya ike nke ukwuu
Nye ya ntụgharị zuru oke, ihe kachasị mkpa ma sie ike bụ ibipụta ya ntụgharị
Anyị ga-ejide ya Ijeoma dị ka anyị chọrọ, ọ bụrụhaala na akụkụ dị larịị dị n'èzí na akụkụ akụkụ ahụ dịkarịrị nso na ihu anyị. Ihe ọ bụla anyị jidere anyị na-arụ ọrụ ọ bụrụhaala na anyị nyere ya ike zuru oke. A na-ejide boomerang site na mpaghara convex maka onye na-agba ụta. Ewepụghị akụkụ mgbe niile. Ihe osise a bụ aka nri
Iwulite na ife boomerang
Na-agbalị wuo boomerangỌ bụ ezie na isi, ọ nwere ụgbọ elu zuru oke ma kụziere anyị ihe gbasara ikuku na anyị nwere ike itinye n'ọrụ ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ boomerang? Ihu ọma ọ bụ nku nke n'ihi ọdịdị ya, profaịlụ ya na ụdị mwepụta anyị na-eme, anyị na-enweta ya ka ọ fee ma laghachikwute anyị. Gịnị kpatara nke a? Site na imepụta profaịlụ nku nku nke ọma, anyị nwere ike iwepụta nrụgide dị ala n'akụkụ nke elu na nke dị elu na akụkụ ala ahụ, wee mepụta ihe a na-akpọ mbuli elu "ọ dịka anyị agbanweela omume nke ike ndọda". N'isiokwu ọzọ enwere ike ịkpọ Gịnị mere ụgbọ elu ji efe?